महिलालाई यौन सन्तुष्टी दिन सक्नु भएन ? यसरी गर्नुहोस सेक्स !
यौन सम्बन्धमा मधुरता छ भने दुवैको सम्बन्धमा नयाँ उर्जाको पनि सञ्चार हुन्छ तर, यदि यौनसम्बन्ध नै बोझिलो भैसकेको छ भने सम्बन्ध पनिबोझिलो हुन सक्छ ।
स्वभाविकै हो युवाहरुले हरेक काम छिटो गर्न चाहन्छन् । युवा उर्जा र जोशको विशेषता नै तातो रगत हो । उनीहरुलाई उत्साहले भरिएका हुन्छन र हरेक काम आँफै गर्न तत्पर रहन्छन् ।युवा पिँढीले हरेक कुरा सिक्न अनुभव गर्न चाहन्छ । आफूलाई मनलागेको कुरा खुलेर गर्न चाहने युवाहरुको स्वभावै हो । प्रेम पनि युवाले खुलेर गर्छन् ।
समाजले खडा गरेका सीमाहरुलाई नाघेर युवाहरु आफ्नो जोश र उर्जाले त्यस्ता पर्खालहरुलाई भत्काउँदै आफ्नै वेगमा कुद्न खोज्छन् । सेक्सको मामिलामा पनि उनीहरु यस्तै हुन्छन् । उनीहरुलाई सम्बन्ध सुरु गरेपछि जतिसक्दो छिटो सेक्सको स्वाद लिन आतुर हुन्छन् । तर, हालसालै गरिएको एक शोधमा यौनसम्पर्कलाई बोझिलो मान्ने युवाहरु पनि धेरै रहेको र शारीरिक सम्पर्कलाई बोझिलो रुपमा लिनाले सम्बन्धमा पनि समस्या देखिएको पाइएको छ । शोधले सेक्समा आएको बोझिलतासँगै सम्बन्धको गर्माहट सकिदैँ जाने र त्यसको नतिजा ब्रेकअप पनि हुन सक्ने देखाएको छ ।
यस्ता युवाहरुले वास्तविक रोमान्स के हो भन्ने भुल्छन् । आजभोलीका युवाहरुमा बढ्दो थकान, दबाब वा निराशाको कारण आफ्नो प्रेमिकाको साथमा यौनसम्बन्ध बोझिलो हुन्छ र त्यसको नकरात्मक असर प्रेमसम्बन्ध वा वैवाहिक सम्बन्धमा पनि पर्छ । युवायुवतीको बीचमा यदि सेक्स सम्बन्धमा मधुरता र सन्तुष्टि छ भने दुवैबीचको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ ।
त्यसैले आउनुहोस् जानिराखौं यौन सम्बन्धको बोझिलतालाई हटाएर कसरी आफ्नो सम्बन्धमा नयाँ जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छः
१. खुलेर व्यक्त गर्नुहोस आफ्नो चाहना:
तपाईंलाई जे राम्रो लागिरहेको छ त्यो बताउनुहोस् र मन नपरेको कुराहरु पनि नलुकाउनुहोस् । आफ्नो साथीसँग हरेक कुरा सेयर गर्नुहोस् र यौनसम्पर्कको समयमा संकोचलाई टाढै राखेर त्यसको पुरा आनन्द लिनुहोस् । तपाईले सम्बन्धको गरमपन फेरि महसुस गर्न सक्नुहनुहोस ।
२. विस्तारै स्पर्श गर्नुहोस्:
स्पर्शलाई प्रेम र यौनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन मानिन्छ । एक मायालु स्पर्शले अंगहरुमा काउकुती लगाउन सक्छ भने गलत तरिकाले गरिएको स्पर्शले मनमा घृणाले भरिन पनि सक्छ । यौनसम्र्पक राख्ने क्रममा यदि आफ्नो साथीलाई स्पर्श गर्ने कला तपाईसँग छ यौनसन्तुष्टि धेरै गुणा बढ्छ । विज्ञहरुका अनुसा प्रेम र सेक्सको गहिरो सम्बन्ध छ । स्किन–टु–स्किन कन्ट्याक्टबाट अक्सिटोसिन लेभल बढ्छ जसकारण तपाई रिल्याक्स महसुस गर्नुहुन्छ र आफ्नो पार्टनरको अझै नजिक जानुहुन्छ ।
३. एकअर्काको शरीरसँग केहीबेर चल्नुहोस:
शरीर शरीर बीच स्पर्श गर्नाले नै कामवासना जागृत हुन्छ । स्पर्शबाट सम्बन्धमा प्रगाढता पनि आउँछ । पार्टनरलाई प्रेमस्पर्श दिनु सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो । पार्टनरको मुड ठिक बनाउन कानको पछाडि आँखामा किस पनि गर्न सकिन्छ
४.जिस्किँदै कुरा गर्ने, कानेखुसी गर्ने:
यौन एक कला हो र यसमा जति प्रयोग गर्यो त्यति निखारता आउँछ । यसैले यौन सम्बन्ध राख्दा नयाँ प्रयोग गर्नबाट नडराउनुहोस् । जब तपाईलाई मौका मिल्छ पार्टनरलाई फोन गर्नुहोस् र रोमान्टिक तथा केहि जिस्किने कुरा गर्नुहोस् । साथै उनीहरुलाई बेलुका जब तपाईहरुको भेट हुन्छ केही सरप्राइज दिदैँ हुनुहुन्छ भन्ने केही संकेत दिनुहोस् । सेक्सलाई लिएर केही इशारा दिनुभयो भने अझै धेरै रमाइलो हुन्छ ।
यदि अझै आनन्द खोजीरहनुभएको छ भने कानमा कानेखुसी गर्ने खेल पनि खेल्न सकिन्छ । यसलाई चाइनिज ‘हृविस्पर गेम’ भनिन्छ । यसमा त्यस्तै छाडा कुरा गर्ने गरेमा झनै मजा दुईगुणा हुन्छ । आफ्नो पार्टनरसँग यो खेल खेल्दा केहि यौनजन्य
कुराहरु पनि गर्नुहोस् ।
५. माहौल होस रमाइलो:
पहिलेको जमानामा विभिन्न किसिमका अत्तरको प्रयोग हुने गथ्र्यो । किनभने सुगन्धको यौनसँग रोचक सम्बध छ । मोहक शरीर र मदहोस बनाउने सुगन्धले सेक्सको चाहना अझै बढ्छ । त्यसैले आफ्नो कोठा वा जहाँ यौनसम्पर्क गर्नुहुन्छ त्यहाँको माहौल रमाइलो बनाउनुहोस् । कोठा सजाउनुहोस् कोठाको बत्ति मधुरो बनाउनुहोस् र रोमान्टिक गीत बजाउनुहोस् । फेरि दिनभरको थकाइ मेटाउन एकअर्काको मसाज गर्नुहोस् ।
६. फोरप्ले र सँगसँगै नुहाउने:
सँधै एकैप्रकारको कार्य गर्नाले त्यसमा बोझिलता आउनु स्वभाविकै हो । हरेक सम्बन्धले केहि नयाँ र रोमाञ्चक कुराको माग गर्छ । कैयौं पटक त्यसको लागि आफै बदलिनुपर्छ । यौन सम्बन्धमा यसै कामलाई रोलप्ले भनिन्छ । यसमा केहि फिक्सन र ननफिक्सन भूमिकालाई मिलाएर एक भूमिका बनाउनुहोस् र आफ्नो पार्टनरसँग यौनकार्य गर्दा त्यसै भूमिकामा रहनुहोस् ।
तपाईंलाई यौनको केही अलग अनुभुती भैरहेको महसुस हुन्छ र रोमाञ्चक अनुभव पनि मिल्नेछ । पार्टनरसँग एक रोमान्टिक कहानी बनाएर आ–आफ्नो रोल बाँड्नुहोस् । बेडरुममा त्यो रोल निभाउँदा तपाईले एक नयाँ अनुभूती प्राप्त गर्नुहुन्छ । साथै आफ्नो सेक्स अपिल बढाउनको लागि पारदर्शी कपडाहरु र अन्तवस्त्रहरुको सहारा लिएमा पनि यौनसम्बन्ध सुखद हुन्छ । त्यस्तै बाथरुममा सँगै नुहाउनु पनि यौन चाहना बढाउने एक नयाँ तरिका हुन सक्छ । बाथरुममा राम्रो पफ्र्यम स्प्रे गर्नुहोस् र बाथटबमा सँगसँगै नुहाउनुहोस् ।
७. तनावमुक्त सेक्स, पोर्नको लत र स्वस्थ खाना: